Warshadaha Shiinaha iyo Warshadaha Shiinaha ee 'Vermiculite' Lingshou
Vermiculite waa nooc macdanta laga sameeyay oo ay ka kooban tahay Mg oo ay ka sii dareysan tahay tan labaad silikates aluminium. Waxaa badanaa lagu sameeyaa cimilada ama beddelaadda hawo-biyoodka biotite ama isku-daboolida. Waxaa loo qaybiyey heerar, vermiculite waxaa loo kala qaybin karaa 'vermiculite' aan qarsooneyn iyo ballaadhinta vermiculite. Waxaa loo qaybiyey midab, waxaa loo kala qaybin karaa dahab iyo qalin (fool maroodi). Vermiculite waxay leedahay sifooyin aad u fiican sida uumiga kuleylka, iska caabbinta qabowga, bakteeriyada ka hortagga, dabka ka hortagga, nuugista biyaha iyo nuugista codka, iwm. Marka la dubo 0.5 ~ 1.0 daqiiqadood ka yar 800 ~ 1000 ℃, cabirkiisa ayaa si dhakhso leh loogu kordhin karaa 8 ilaa 15 jeer, ilaa 30 jeer, oo midabku isu beddelay dahab ama qalin, soosaarid jilicsan oo nuxur leh oo la ballaariyey oo aan anti-acid iyo liidata ku ah waxqabadka korantada. Vermiculite kadib geedi socodka balaadhinta wuxuu qaadan doonaa qaab jajabnaan leh, oo saamiga guud ahaan uu yahay 100-200kg / m³ (Qiyaas ahaan mugga balaaran ee loo yaqaan 'vermiculite' oo balaaran, qiimaha safarka ayaa noqon lahaa mid aad u weyn, sidaa darteed vermiculite la dhoofiyey badanaa waa noocyo aan la aqoon) .
Faahfaahinta cayiman ee loo yaqaan 'vermiculite': 0.15-0.5mm, 0.5-1mm, 1-3mm, 2-4mm, 3-6mm, 4-8mm, 8-16mm.
Astaamaha Jirka iyo Kiimikada ee Vermiculite
Sababtoo ah heerar kaladuwan oo ah hawo-qaadashada iyo qiiqa jirka, walxaha kiimikaad ee samaynta vermiculite isku mid ma ahan. Qaaciddada kiimikada ee vermiculite waa: Mg x (H2O) (Mg3-x) (ALSiO3O10) (OH2)
Beeraha, vermiculite waxaa loo isticmaali karaa qaboojiyeyaal ciid ah, sababtuna tahay isweydaarsiga cation-ka iyo maqnaanshaha, hagaajinta qaab-dhismeedka carrada, biyo kaydinta iyo qoyaanka ciidda, horumarinta ciidda carrada iyo waxyaabaha biyaha ku jira, ka dhig carrada aashitada in loo beddelo ciid dhexdhexaad ah; vermiculite sidoo kale waxay ciyaari kartaa door wax iibin, waxay caqabad ku tahay isbeddelada deg degga ah ee qiimaha PH, sameynta bacrimiyuhu si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah, iyo u ogolaanaya in waxyar xad dhaaf ah loo isticmaalo bacriminta dhirta laakiin ma ahan wax waxyeelo leh. Vermiculite sidoo kale waa la siin karaa si dalagga laftiisa ay ka kooban tahay K, Mg, Ca, Fe, iyo raad raacinta walxaha ka mid ah Cu, Zu. Sida nuugista, isweydaarsiga cation iyo astaamaha halabuurka kiimikada ee vermiculite, sidaa daraadeed waxay ciyaartaa dayactirka bacrimiinta, haynta biyaha, kaydinta biyaha, iyo isbadalka miraha iyo macdanta, iyo doorar kale oo badan. Tijaabooyinku waxay muujiyeen: dhig 0.5-1% balaariyay vermiculite isku qasan oo bacrimi, awood u siinta wax soo saarka dalagga illaa 15%.
Jardiinada, khudradda 'vermiculite' waxaa loo isticmaali karaa ubaxyada, khudradda, dalaga miraha, taranta iyo dhinacyo kale, ku daridda dherjinta carrada iyo xeeriyeyaasha, laakiin sidoo kale dhaqanka aan carrada lahayn. Sidii ay u noqon lahayd xididdada-cawska ee nafaqada loogu talagalay abuuritaanka geedo la dubay iyo abuur-abuur, waxay faa'iido u leedahay ku-tallaalida iyo safrinta geedaha. Vermiculite waxay si wax ku ool ah u kobcin kartaa horumarka xididdada geedka iyo koritaanka abuurka, waxay bixin kartaa biyo iyo nafaqo ee dhirtu weynaaneysaa waqti dheer, waxayna ku hayn kartaa heerkulka xididdada degganaan. Vermiculite waxay ka dhigi kartaa geedka inuu helo biyo iyo macdan ku filan marxaladda bilowga ah, kor u qaado dhirtu si dhakhso leh ugu korto, oo ay u kordhiso wax soo saarka.
Balaadhinta balaastiigga ah ee loo yaqaan 'vermiculite', oo lagu dhejiyay saqafka, ayaa ciyaari doona kuleyl aad u wanaagsan oo kufilan, kaas oo dhismaha ka dhigaya mid diirran xilliga qaboobaha iyo qabow xagaaga. U isticmaalida lebenka geedaha vermiculite derbiga qaybtiisa sare ee kor u kaca ama adoo adeegsanaya baloogyada loo yaqaan 'vermiculite blocks' sidii alaabada qaybinta hudheellada ama xarumaha madaddaalada, saameynta nuugista dhawaaqa, caddeynta dabka, ilaalinta kuleylka iyo wixii la mid ah ayaa si buuxda loo soo bandhigi doonaa dhismaha ayaa sidoo kale laga dhimi doonaa hawshiisa. .
Qeybaha yar ee hawada ayaa soo fida kadib fidinta vermiculite, taasoo u suurta gelineysa fidinta vermiculite inay noqoto qalab xakameynaya codka. Markay noqoneyso 2000C / S, codka-qaadashada codka 5mm qafiifka ah ee mugga leh waa 63%, 6mm 84% iyo 8mm 90%.
Vermiculite aad ayey ugu fiican tahay iska caabinta dhaxan maadaama awoodeeda iyo xooggeedu ay isku mid ahaanayaan xitaa markay dhaafo 40 jeer oo ah tijaabooyinka-wareejinta barafka -20 ℃. Waa mid dhib badan oo leh hanti nuugis ah. Waxay hayn kartaa kuleylka waxayna ka hortagtaa uumiga. Ka sokow, waxay nuugi kartaa iftiinka shucaaca, sidaa darteed looxyada vermiculite ayaa lagu dhex dhigi karaa sheybaarka si loogu beddelo looxyada macdanta qaaliga ah si ay u nuugaan illaa 90% ee fallaaraha kala firidhsan. 65mm dhumucda mugdiga ah waxay u dhigantaa 1mm qaro weyn oo loox ah
Ballaarinta budada loo yaqaan 'vermiculite budada' waxaa sameeyay budada 'vermiculite ore', waxaa lagu xardhay heerkul sare, baaritaanka, shiidi. Faahfaahinta ugu weyn waa: 3-8mm, 1-3mm, 10-20mesh, 20-40mesh, 40-60mesh, 60mes, 200mes, 325mes, 1250mesh. Codsashada: Qalabka korantada guryaha, aaladda qaboojiyaha guriga, muraayadda gaariga, kuleylka dhawaqa, badbaadada iyo tuubbada maqaarka, dharka dharka kuleylka, sariiraha birta, sibidhka dahaarka guluubka, qalabka korantada gawaarida, qalabka korontada ee diyaaradda, qalabka dahaarka qaboojinta, baska qalabka dahaarka, munaasibadaha biyo qaboojinta, darbiyada biyo qabatinka ah, qalabka dab-damiska, miirayaasha, keydinta qabow, biyo-mareenka, sabuuradaha saqafka leh, alwaaxyada, guddiyada albaabaarka, waraaqaha derbiga, xayeysiinta bannaanka, rinjiga, kordhinta muuqaalka rinjiga, qoryaha jilicsan ee sawirka dabka. waraaqda kaadhka dabka, qalin dahab iyo naxaas ah, rinji waxyaabaha ka baxsan.
Xiga: Midabka Flake
Midabka Flake 4019